आइफोन र आइप्याड अपडेट गर्नुभयो ? अन्यथा पेपरवैटमा बदलिनेछ ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एजेन्सी । अमेरिकन बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘एप्पल’ले पुराना आइफोन र आइप्याडहरुमा आज(आइतबार)सम्ममा पछिल्लो आइओएस सफ्टवेयर अपडेट नगरेमा इन्टरनेट कनेक्सन हुन नसक्ने जनाएको छ । यदि त्यसो भएमा तपाइको आइफोन/आइप्याड पेपरवैट(फलामको एउटा टुक्रा) मात्रै रहनेछ ।
आइफोन र आइप्याड सन् २०१२ का वा त्यो भन्दाअघि निर्माण गरिएकाहरुलाई नोभेम्बर ३ अर्थात् आजसम्ममा अपडेट गर्नुपर्ने जनाइएको छ । एप्पलकाअनुसार यो जीपीएस टाइम रोलओभरको विषयका कारणले हो ।
अमेरिकी उर्जा मन्त्रालयको विद्युत कार्यालयका अनुसार हरेक १९ वर्षमा जीपीएस डिभाइसको समय र तिथीको रिसेट गर्नु जरुरी हुने गर्दछ । एप्पलले यदि कसैसँग आइफोन ५, ४ वा सेलुलर भएको आइप्याड मिनी, आइप्याड सेकेन्ड वा थर्ड जेनेरेसन छ भने अपडेट गर्न भनेको छ ।
यदि ग्राहक आफ्नो आइफोन र आइप्याड कुन भर्सनको हो भन्ने बारेमा प्रष्ट नभएमा सेटिङ एप खोलेर पहिला जनरलमा थिच्ने र त्यसपछि एबाउटमा जान सकिनेछ । त्यसपछि सफ्टवेयर भर्सनको नम्बरमा हेर्न सकिने जनाइएको छ ।